Hawlgabka Beerka - Wikipedia
Hepaticfailure (Howlgabka beerka)
Howlgabka beerka () waa cudur halis ah oo loo dhinto, inkastoo soomaalidu aanan aqoon badani xanuunkaan u lahayn laakiin markii ay tilmaamayaan qofka u dhintay waxay yiraahdaan, cagaarshow ayaa ku dhacay, kadibne daawooyin ayaa la siiyay, kadib calooshaa barartay, kadib sankaa aam afkaa dhiig ka imaaday, kadine miyirkaa ka tagay, dhowr maalmood ka dibne wuu dhintay.
3 Jaadadka Xanuunkaan
Tilmaan[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Sidaas loo tilmaamay ayuu xanuunka lagu gartaa laakiin dhibka ugu weyn ee soomaalida haysta oo aan rabo in aan ku xuso qoraalkaan in laga digtoonaado ayaa ah hal qodob kaliya oo keeni karo in qofka sabab ugu noqoto in uu u dhinto.
Cagaarshowga[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Cagaarshowga labadiisa nooc ee B iyo C ayaa ah labada cudur oo ugu horreeya ee howlgabiya beerka, waana laba cudur oo bulshada soomaalida ku badan, dadka badanaa ma oga in ay xanuunkaan qabaan illaa in la ogaado ayagoo dhiig qof kale u shubi raba mooyee, laakiin dadka la soo xanuunsada waa laga helaa iyagane markii la baaro.
Beerka waa xubin aad muhiim ugu ah jirka biniaadanka, waxaa loo yaqaanaa kushiinka ama jikada jirka, wax kasta oo jirka qaato cunno ama daawo wixii ahaadaba, beerka ayaa kala habeeya oo sunta ka saaro, kadibne ka dhigo wax saafi ah oo jirka ka faaidaysan karo.
Beerka wuxuu kaloo soo saaraa waxyaabo jirka mihiim u ah sida proteins-ka iyo waxyaabaha ka qeyb qaato xinjiroobidda dhiiga iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah.
Beerka markuu jirado, howshaas uu qaban jiray wuu gabaa, waxaana keeni karo xanuunada aan soo tilmaamay sida cagaarshowga oo dhaawac gaarsiiyo beerka ama cabidda khamriga ama xanuunno beerka sidiisa ugu dhaco.
Beerka markuu howl gabo calaamdada ugu horreeyo oo lagu garto waxaa ka mid ah in qofka indhaha midab jaallo yeeshaan, bog xanuun, caajis, cunno xumo iyo miisaanka oo qofka ka lumo.
Jaadadka Xanuunkaan[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Howlgabka beerka waxaa loo qeybiyaa laba nuuc: 1) Mid degdeg ah: oo qofka markuu beerka ka xanuunsado maalmo ka diba howsha uu joojin karo 2) Mid raaga: oo qofka iska wadan karo oo uu la noolyahay dhowr bilood ama sanadood.
Xanuunkaas markuu qofka dareemo waxa uu u baahan yahay kaliya waaa in beerka laga dhasiyo wixii howl uu qaban jiray oo macnaheedu tahay wixii daawo ah in laga fogaado iyo cunanda culus sida wax dufanka leh, la cabo biyo badan iyo wax macaan sida malabka ama qaraha oo kale. Hadduu qofka aad u xanuunsan yahayne intaa loogama badiyo, waxaa dhici karto in biyaha lagu xiro oo faleebo ahaan loo siiyo uun.
Wax yar ka dib qofka wuu caafimaadaa oo indhaha way ka dagaan midabkii, kaadida midabkeedii ayaa ku soo laabto, qofkane caafimaad ayuu dareemaa.
Laakiin dhibka ugu weyn waxay timaadaa, markii qofka isagoo saa u xanuunsan farmashi la geeyo ama takhtar aan aqoon u lahayn xanuunkiisa lala xiriiriyo oo lagu bilaabo daawooyin kala duwan oo badan oo beerka dhaawac sii gaarsiinaya oo hadhowgii qofka dhici karto inuu u dhinto inta hala daaweeyo la is leeyahay.
Fadlan hadduu qofka cagaarshow ku dhaco, sababtane ay tahay cudur feyras keenay ama xanuun beerka ku dhacay fadlan daawo ha siinin, takhtar aqoon leh la xiriirsii.
Takhtarka isagaa kuu kala sheegi doono hadduu xanuunka sida aan soo tilmaamay in loo daaweeyo u baahan yahay iyo haddii uu baahan yahay si kale in loo daaweeyo maadaama ay dhici karaan xanuuno kale oo beerka wax gaarsiin karo oo calaamadahaa yeelan karo sida in xameetida ay jiran tahay oo kale, ama marinnada qarasta marto ay xanniban yihiin.
Waxaan ka codsanayaa dadka daawada gado ama farmashiyada ka howlgalo ama xarumaha caafimaadka ka shaqeeyo in aysan xanuunada beerka ku dhaco ay kala tashtaan takhaatiir ka aqoon roon cudurradaas.
Boqolkiiba 80% dadka aan arkay oo u geeriyooday howlgabka beerka waxay ahaayeen dad la qalday daaweyntoodii saxda ahayd oo la siiyay daawooyin dhibaato u geystay.
Beerka markuu howlgabo, waxaa lagu ogaadaa in caloosha (Obucda) ay biyo galaan, xinjiroobis la'aan xagga dhiigga ah oo meelaha jirka cirbada la suro in dhiiga uu istaagi kari waayo, aam jirka uu yeesho meelo in dhiig ay fadhiyaan oo kale, kadib qofka wuxuu galaa Coma, ama hurdo dheer oo uusan ka soo toosi karin una badan maalintii, waxaa kaloo lagu arkaa in gacmaha ay jareeyaan iyo afka. 
Tixraac[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hawlgabka_Beerka&oldid=156919"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 May 2016, marka ee eheed 14:00.